မန်ယူကစားသမားသစ်နှစ်ဦး အသင်းနှင့်အံဝင်ဖို့ ရုန်းကန်ရအုံးမည်ဟု ဆိုးရှားလ်ပြော… – FBV SPORT NEWS
မန်ယူကစားသမားသစ်နှစ်ဦး အသင်းနှင့်အံဝင်ဖို့ ရုန်းကန်ရအုံးမည်ဟု ဆိုးရှားလ်ပြော…
October 29, 2020 By admin Sports News
မန်ချက်စတာယူနိုက်စ် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ် ဂျာမန် ဘီလူးကြီး လိုင်ဇက်ကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားခဲ့ပြီး ရတ်ဖို့စ် ရဲ့ ဟက်ထရစ်သွင်းဂိုးနဲ့ အတူ ၅-၀ ဖြင့် ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်……
ပထမပိုင်းမှာ လိုင်ဇက်က ဖိအားပေးကစားနေသော်လည်း အဓိက ကစားသမားတချို့ ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ဟာ လိုင်ဇက်အသင်းဘက်ကို တောက်လျောက်ထိုးဖောက်လာနိုင်ပြီးတော့ ဂိုးတွေဆက်တိုက်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်…..
ပထမပိုင်းတွင် မာရှယ်ရဲ့ ထိုးဖောက်မှုများရှိနေသော်လည်း အဆုံးသတ်မသေချာမှု ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးမှုတချို့နဲ့အတူ ဂရင်းဝုဒ်ရဲ့ဂိုးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပြီး ဒုတိယပိုင်း ပင်နယ်တီမှာ မာရှယ်ဟာ ဂိုးသွင်းစေခဲ့ကာ ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့စေခဲ့ပါတယ်….
ဆိုးရှားလ်က ” အသင်းရဲ့ ကစားသမားအသစ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကာဗာနီ နဲ့ ဗန်ဒါဘတ်တို့ကတော့ အသင်းကစားကွက်နဲ့ အံဝင်ဖို့ ကြိုစားရပါအုံးမယ် ကျနော် ဗန်ဒါဘတ်ကို ဝေဖန်သံတွေကြားထဲကနေ ဘဲ ပွဲအစကတည်းက ထည့်သွင်း ကစားစေခဲ့ပါတယ်…အနည်းငယ်လွဲချော်မှုတွေ နေရာယူမှားတာလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်….
ကာဗာနီကတော့ တိုက်စစ်မှာ အားထားဖို့ သူကြိုးစားရအုံးမယ် အံဝင်တဲ့ကစားကွက်မှာ အသင်းရဲ့ စုဖွဲ့မှုအားကောင်းဖို့ မာရှယ် ရတ်ဖို့ ဘရူနို ကာဗာနီ ပေါ့ဘာ တို့က အဓိက ကစားသမားတွေလို သတ်မှတ်ထားတော့ ကာဗာနီ သူတို့ နဲ့အထိုင်ကျဖို့အချိန်ယူရပါအုံးမယ်….ဗန်ဒါဘတ်ရော ကာဗာနီရောက တကယ့်ကောင်းတဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးပါ …သူတို့ကို အချိန်ပေးဖို့လိုပါအုံးမယ် ဆိုပြီး ဆိုးရှားလ်က MUTV မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်…..
ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်များအတွက် Line Up အရံ ရှိပြီးသား ဟု ဆိုးရှားလ်ပြော….